Cape waxay dhammeystireysaa marxaladdii koowaad ee wareegga kanaalka - Ellicott Dredges Blog
Source: Xaragada Maalinlaha ah ee Cape Coral
Magaalada iyo shirkad qoda qodista ayaa dhameystiray wejigii koowaad ee qorshe guud oo lagu maareynayo qashin qubka maareynta dhammaan nidaamka kanaalka magaalada.
Michael Ilczyszyn, maamulaha ganacsiga magaalada, iyo Jack Adams oo ka tirsan Gator Dredging ayaa u soo bandhigay Golaha Magaalada inta ay ku guda jireen howlihii aqoon isweydaarsiga Isniinta ee ka socda Magaalada Hall qorshihiisa ah in lagu weeciyo rubuca koonfur-bari.
Soo bandhigidda oo dhan, dhammaan bogagga 179, waxaa lagu arki karaa khadka tooska ah. Adams iyo Ilczyszyn waxay golaha siinayeen iftiimin.
Quadrant-koonfur-bari, oo leh 349 oo loogu magac daray kanaalrooyinka xNUMX mayl, waxay ku taalaa koonfurta Hancock Bridge Parkway iyo bariga Santa Barbara Boulevard waana la yareyn doonaa, laga bilaabo horraantii Abriil, muddo saddex sano ah.
Quadrant-ka koonfur-bari, oo aan qodnayn ku dhowaad 20 sano, waa in lagu dhammaystiraa maalgalinta hadda, iyo habab loo oggol yahay qodista, ayuu yiri Ilczyszyn.
Isku soo wada duuboo, 42,868 dhudhun oo laba jibbaaran oo weel ah ayaa la rajeynayaa in laga soo qulqulo sagxdeeda hoose si dib loogu dhiso moolka la oggol yahay.
Muunad kala sooca iyo kala-shaandheynta ayaa laga sameeyay shan goobood oo ku yaal dhammaan rubuc-hoosaadka.
Ellicott® Brand 300 SL Swinging Dragon® dredge waxaa loo isticmaalaa nidaamka kanaalka Cape Coral.
Kanaallada koonfur-bari dhammaantood waa la maqlayay waxaana xirmooyinka xNUMX ee fidinaya maylkooda xNUMX mayl ama ka badan dhererkoodu u baahnaayeen sahamin biyo-xeel dheer.
Sideed howlood oo la qabtay intii lagu gudajiray qorshaha mashiinka waxaa ka mid ahaa dhawaaqa kanaalka, xog aruurinta, sahaminta aag biyo-ku-shubista, sahaminta qashin-qubka, goobta shidaalka, heerka qiimaynta adeegyada, horumarka qorshaha iyo warbixinta.
Chris Chulakes-Leetz oo xubin ka ah golaha deegaanka ayaa walaac ka qabay qorshaha 'Master', sida sida qashin-qubka loo bixin doono iyo inta ay qaadanayso ka hor inta aan mar kale la quusin.
Ilczyszyn wuxuu sheegay inay ka imaaneyso $ 1million ee caadiga ah $ $ $ 0 $ 1.2 si lacagta magaalada loo siiyo sanad-dhaafka iyo in ay qaadan doonto sannadaha 15-20 ka hor inta uusan rubuc-dhicinta mar kale la qalin, iyada oo u maleyneyso inaysan jirin wax la filan karo oo dhacaya.
Leetz wuxuu sidoo kale ka walaacsanaa samaynta salka hoose ee marinnada.
“Ma ahan nacasnimo iyo tayo sare oo loo qodayo,” ayuu yiri Adams. "Ma aanan sameynin falanqeyn kiimikaad ah sababtoo ah iyada oo aan kicin, ma ogaan karno walxaha kiimikada."
Wakiilka Golaha, Marty McClain wuxuu sheegay inuu doonayo jadwal qodis oo sidoo kale la weydiiyay haddii biyo-qabatin lagu sameyn karo bartamaha kanaalka. Adams iyo Ilczyszyn ayaa sheegay in labadaba ay suurta gal tahay.
Ujeeddada qulqulaya ayaa ah in kor loo qaado qulqulka saxda ah, yareynta fatahaadda, in la bixiyo awoodda daadinta inta lagu gudajiro duufaanta iyo dhacdooyinka aan caadiga ahayn, in la wanaajiyo deegaanka dabiiciga iyo bixinta biyo nadiif ah.
Dib loo daabacay Xaragada Maalinlaha ah ee Cape Coral
Ku Bilaab Mashruucaaga Kala-Sooca Canal-ka Ellicott